जागिरको लागि कुमारी जब सजिलो » aarthikplus
वि.सं.२०७९ वैशाख २५ आइतवार १५:५७
काठमाडौं।आजसम्म पनि नेपालमा राम्रो काम पाइँदैन र पाइए पनि परिश्रम अनुसारको तलब पाइँदैन भन्ने मानसिकता बोकेको जमात ठुलै छ । तर, नेपालमै पनि यस्ता थुप्रै मानिसहरु छन् जसले आफ्नो क्षमता अनुसारको अवसर पाएका छन् र उक्त अवसर तथा त्यसले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधामा सन्तुष्ट पनि छन् । विगत ८ वर्षदेखि यसै गरी धेरैजनालाई कुमारी जबले निःशुल्क र सहज रुपमा जागिर खोजिदिँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा के.एल. दुगडको स्मार्ट अप्लायन्सेज डिपार्ट्मेन्टमा सि.इ.ओ.को रुपमा कार्यरत श्री रोहित रौनियारज्युसँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :
१.तपाईले यहाँ काम गर्न थाल्नुभएको कति भयो ?
मैले यहाँ काम गर्न थालेको २ वर्ष भयो ।
२.तपाइले जागिर खोज्ने क्रममा के–के गर्नुभयो, त्यसको बारेमा पनि बताईदिनुहोस न ?
खासमा म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नियोटेरिक नेपालमा सिइओको रुपमा कार्यरत थिँए । र त्यसै समयमा कुमारी जबले मलाई के.एल. दुगडमा राम्रो अवसर भएको जानकारी गरायो ।
३. कामको लागि कुमारी जबले तपाईंलाई कस्तो सहयोग अथवा गाइडेन्स गर्यो ?
कुमारी जबले मलाई के.एल. दुगडको सम्बन्धित विभागसँग मिटिङ गराइदिनेदेखि लिएर अन्य आवश्यक सहयोग गर्यो । यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु मलाई अत्यन्तै मिलनसार र सहयोगी लाग्यो ।
४. कुमारी जबबाट तपाईंको अपेक्षा के थियो र अपेक्षा अनुरुपको सहयोग पाउनुभयो कि भएन ?
मेरो आवश्यकता र अपेक्षा अनुरुप नै सबै कुरा भयो । वास्तवमा वहाँहरुले उक्त अवसरको बारेमा जानकारी गराएपछि मैले सम्बन्धित कम्पनीमै बाँकी कुरा गर्न चाहेको थिँए । वहाँहरुले त्यही अनुसार नै समय र सन्दर्भ मिलाइदिनुभयो ।
५.कुमारी जब मार्फत पाएको रोजगारीले तपाईंको जीवनमा के परिवर्तन ल्याएको छ ?
मैले अहिलेसम्म मेरो कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छु । मलाई लाग्छ राम्रो काम पाउनु र त्यसलाई निरन्तरता दिनु नै हामी जस्तो कर्मजीविहरुको लागि महत्वपूर्ण कुरा हो ।
६.अहिले गर्नुभएको पेशामा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
७.यो अवसर जुराइदिएकोमा कुमारी जबलाई केहि भन्न चाहनुहुन्छ ?
मलाई यसरी राम्रो अवसर दिलाईदिएकोमा कुमारी जब प्रति आभारी छु । वहाँहरुले जुन प्रकारले निःशुल्क रुपमा जागिर खोजिदिँदै आउनुभएको छ त्यसले पक्कै पनि धेरै जनाको करीयर र जीवनमै सकरात्मक परिवर्तन ल्याएको छ । हामी काम गरिरहेका मानिसहरुलाई यस्तो अवसरहरुको बारेमा खासै थाहा हुँदैन । राम्रो अवसरको खोजीमा रहेका म जस्तै अन्य उम्मेदवारहरुलाई कुमारी जबले यस्तै सेवा प्रदान गर्दै जावस् । व्यवसाय मात्रै गर्नुभन्दा पनि आफ्नै करियरमा पनि सन्तुष्ट हुन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन पनि कुमारी जब सफल होओस् । र यसै गरि आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै जावस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु ।